Cocaine sy bilaogy | Martech Zone
Cocaine sy bilaogy
Alarobia 31 Janoary 2007 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Nanoratra lahatsoratra mahafinaritra i Lewis Green, nantsoina Aiza ny hen'omby amin'ny fanaovana bilaogy?, zahao izany rehefa azonao ilay fotoana.
Raha handeha ho any amin'ny oniversite aho dia ny iray amin'ireo taratasy sy fanadihadiana nataoko dia ny fiankinan-doha amin'ny kôkainina. Miala tsiny mialoha aho noho ny tsy fanomezanao trosa ny loharanom-pahalalana azoko, saingy eto ny marina. Ilay mpidoroka mahomby dia mandika ny fahazarany amin'ny salan'isa fahasivy taonan'ny fanarenana. Taona fahasivy! Raha lazaina amin'ny teny hafa dia manangana ivon-toerana famerenana amin'ny laoniny anio, fa tsy hamerina ireo tombony afaka sivy taona ianao.
Ny olana? Ny mpanao politika dia lany isaky ny 4 taona. Ny manahirana dia ny hoe raha manana olana goavana amin'ny kôkainina ny faritra iray amin'ny tanàn-dehibe dia manaraka ny heloka… fangalarana, ady, vonoan'olona, ​​sns. Saingy mila sivy taona tokoa izy ireo hanamboarana izany, sa tsy izany? Hmmm. Manana 4 taona fotsiny izy ireo.
Ka ny vahaolana dia miova manomboka amin'ny fanarenana mankany amin'ny fanagadrana. Ny mpanao politika mahomby dia tsy manampy amin'ny fanatsarana ny taham-pahavitrihan'ny mpampiasa kôkainina, miala amin'ny arabe araka izay azony atao izy ireo alohan'ny fifidianana manaraka. Tena tsy manan-tsafidy izy ireo. Mangataka valiny ireo mpiorina. Vokatr'izany dia feno mpanararaotra zava-mahadomelina ireo fonja fonenanay izay mbola hivoaka, migadra, navotsotra, naiditra am-ponja sns.
Mandritra ny fotoana maharitra, ny vidin'ny fampidirana am-ponja dia mampihena ny vidin'ny foibe fanarenana. Rehefa mijery ny teti-bola isan-taona momba ny “Ady amin'ny zava-mahadomelina” any Etazonia ianao, dia ho hitanao fa ny teti-bola ho an'ny fanarenana dia zara raha zahana amin'ny tetibola iray manontolo. Tsy misy farany, ary tsy misy fanantenana hafa koa raha tsy ny siansa no afaka miditra an-tsehatra amin'ny fomba fohy sy fohy kokoa.
Inona no ifandraisan'ny kôkainina amin'ny fanaovana bilaogy?
Ny fitorahana bilaogy ho toy ny paikady marketing dia paikady tsotra izao. Tsy hetsika ny fanaovana bilaogy. Ny lahatsoratra tsirairay dia mifandray amin'ny farany ary mitondra mankany amin'ny manaraka. Ny fidirana bilaogy tokana dia tsy hahatonga anao any ho any, fa an'arivony amin'izy ireo no hanomboka hamorona vondron'olona mpamaky ary sary mazava tsara amin'ny fahalalanao, ny zavatra niainanao ary ny toetranao. Izy ireo koa dia hanentana ny sainao sy ny toetranao, ny fahefanao ary ny milina fikarohana.
Ka… aiza ny ROI amin'izany?
Mila manome ROI amin'ny dolara marketing ianao, marina? Manana bilaogy 10 ao amin'ny tranokalan'ny orinasanao ianao, mandany ora amina mpitantana 10 isan-kerinandro hanoratana azy ireo sy mpiasa IT hanohana azy ireo. Betsaka ny vola amin'io singa andalana io, sa tsy izany? Ary afaka herintaona, inona no tsy maintsy asehonao amin'izany? Manana orinasa bebe kokoa ve ianao? Manana tombony bebe kokoa ve ianao?
Eto no mampiakatra ny lohany ratsy tarehy ny olana. Tapitra ny fihodinan'ny tetibola mandritra ny taona ary tsy manana zavatra aseho amin'izany ianao. Tsy misy na iray aza amin'ireo mpanjifanao vaovao azo tondroina ho avy amin'ny bilaoginao. Tsy mandeha io zavatra io! Hype Web 2.0 daholo! Tsy manao bilaogy izahay ary mahazo mpanjifa bebe kokoa. Mividy doka amin'ny sora-baventy izahay ary mahavita zavatra tsara kokoa noho ny bilaoginay izy ireo.
Azo antoka fa manao izany izy ireo.
Ny olana amin'ireo doka dia ny tsy fananganana ny lazanao. Tsy avelan'izy ireo hiresaka aminao ny vinavinanao sy ny mpanjifanao. Tsy manampy amin'ny fanatsarana ny motera fikarohana izy ireo. Tsy vokatry ny varotra am-bava akory izy ireo. Tsy manampy amin'ny fitazonana ny mpanjifa izy ireo.
Ka tsy tokony hikarakara tsara ny fifandraisanao sy ny fahasitrananao mandritra ny fotoana maharitra ianao, fa tsy maintsy misafidy ny manipy azy any am-ponja. Ny programa marketing anao dia nanjary varavarana mihodinkodina ao am-ponja… doka novidiana, valiny mediocre, doka novidina, valiny mediocre, hatrany hatrany hatrany.
Miankina aminao. Tena stratejika ny olana. Raha vonona ny hanokana fotoana sy enti-miasa ianao hananganana ny fisian'ny Internet sy ny fahefanao (ary manana talenta hanalana azy ianao) dia ho hitanao ny valiny. Hihamafy ny marikao, haneno ny telefaoninao, ary ho hitanao fa voahodidin'ny tambajotra mpanjifa, mpamaky, mpankafy, namana ary loharano tsy azo soloina ianao. Ho hitanao fa misarika ny sainao bebe kokoa ireo tranonkalanao.
Ny mpiara-miasa amiko iray izay manomboka ny orinasan-dry zareo manokana mampihatra ny teknolojia fanaovana bilaogy dia nilaza tamiko tamin'ny sakafo atoandro, "Na aiza na aiza no tadiavinay vaovao momba ny fitorahana bilaogy dia mahita ny anaranao Doug!" Tena tsy izany mihitsy. Izaho dia tsy bilaogera A-List ary tsy misy na aiza na aiza ny anarako. Na izany aza, io Mijoro rehefa mahita an'io satria mahalala ahy.
Ka inona ny tambiny amin'ny fampiasam-bola, Doug?
Izaho dia nanao bilaogy nandritra ny herintaona latsaka ary nanana antsasaky ny roambinifolo niaraka tamin'ireo matihanina amin'ny indostria, nanana mpivady A-listers nitsidika ny tranokalako aho ary naneho hevitra momba azy io, nanana editor namaky boky iray aho Manoratra aho (nomeny torohevitra tsara aho!), efa nitafatafa tamin'ny fahitalavitra teo an-toerana sy ny vaovao aho, notolorana fiaraha-miasa amin'ny orinasa aho, ary nahazo namana tsy tambo isaina. Manana vola bebe kokoa ao am-paosiko ve aho? Mety tsy… fa ho avy.
Vonona ny hiasa an'ity aho mandritra ny 9 taona, saingy matokia ahy fa tsy mila izany aho. Ho avy tsy ho ela ny valiny. Roa herinandro lasa izay dia nisakafo atoandro mahafinaritra niaraka tamin'ny CEO an'ny Vahaolana Bitwise ary nanontany ahy izy hoe: "Aiza ny ROI?"
Ho avy ny ROI, hoy aho. Nampitahako tamin'ny fianarako tany amin'ny oniversite ny fandraisako bilaogy. Rehefa manomboka amin'ny oniversite ianao ary mampiditra vola aman'arivony dolara amin'ny fanabeazana dia tsy mijanona isaky ny telovolana na taona ianao ary manontany hoe aiza ny ROI. Fantatrao fa ho avy izy io satria manangana ny fahefana, ny fahamendrehana, ny traikefa ary ny fanabeazana ianao.
Manantena ny fizarana diplaomako aho. Tsy haiko hoe rahoviana no ho avy, fa ho eto izany alohan'ny hahalalanao azy.
1 Mey 2007 tamin'ny 5:51 hariva
1 Mey 2007 tamin'ny 7:32 hariva
Mar 29, 2007 ao amin'ny 3: PM PM
Lahatsoratra tena tsara, Doug. Diniho ity bilaogera A-list iray ity izay sendra tena maotina!
17 Okt 2007 amin'ny 2:10 PM
Mahaliana..mifangaro olana maro ianao .. Miandry ny fidirana momba ny diplaomanao izahay!